थाहा पाइराख्नुस् के हो असुरो ? यस्ता छन् औषधीय गुण – Sky News Nepal
थाहा पाइराख्नुस् के हो असुरो ? यस्ता छन् औषधीय गुण
१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १४:०४ मा प्रकाशित
– असुरो श्वास रोगीका लागि उपयोगी हुन्छ।
– असुरोको पातको ताजा रस महसँग मिसाएर चाट्दा पुरानो खोकी तथा श्वाससम्बन्धी समस्यामा लाभ मिल्छ।
– १ चम्चा असुरोको पातको रस, १ चम्चा अदुवाको रस तथा १ चम्चा मह मिसाएर खाँदा सबै खालका खोकी तथा श्वास समस्यामा आराम हुन्छ।
– असुरो, बेसार, धनियाँ, गुर्जो, पीपल र सुठोको काँडा (क्वाथ) मा १ ग्राम मरीचको धूलो हालेर दिनमा ३ पटक पिउँदा सबै खालका श्वास तथा दम रोगीले लाभ प्राप्त गर्छन्।
– असुरोको पातको रस र सुठो वा अदुवाको रस मिसाएर पकाउने र सेलाएपछि मह मिसाएर दिनमा तीन पटक चाट्दा दम तथा श्वाससम्बन्धी समस्यामा फाइदा हुन्छ।
– असुरोको पात पकाएर कुल्ला गर्नाले दाँत तथा गिजाका रोगीलाई फाइदा हुन्छ।
– असुरोको डाँठले दाँत माझ्दा दम, गिजा तथा मुखको रोग ठीक हुन्छ।
– छायाँमा सुकाइएको असुरोको पातको चिया बनाएर खादा टाउको दुखाइलगायत मस्तिष्कसम्बन्धी अन्य समस्यामा पनि लाभ मिल्छ।
– जोर्नी वा अन्य पीडामा असुुरोको पहेंलो पात तताएर सेक्न सकिन्छ। यो सुन्निएको ठाउँमा पनि उपयोगी हुन्छ।
– असुरोको १० ग्राम रसमा मह मिसाएर बिहान बेलुका खाँदा श्वेत प्रदरको समस्या ठीक हुन्छ।
– असुरोको सुकेको पात पुस्तकका पानाहरूमा राख्दा कीरा लाग्दैन। (झारपात)